Cabdulahi Yusuf iyo Beesha Caalamka aragtiyadooda!! | Arimaha Bulshada
November 12, 2007 at 1:37 am | Posted in siyasada somalia | Leave a comment
Marna ma qarsadaan diblomaasiyiinta fadhigooda yahay Magaalada Nairobi in xaalada Soomaaliya tahay mid muruga badan oo khilaafkeeduna ka mugweyn yahay is qabqabsiga siyaasadeed ee u dhaxeeya siyaasiyiinta dalka iyo qabiilada ismaandhaafsan ee midkoodna aanu heyn xal waara ee dalka Soomaaliya ka gudbin kara marxalada uu ku sugan yahay.
Shisheeyahu qaar kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan Soomaalida oo hore u sii ambaqaada dib u heshiisiinta iyo meelmarinta dimoqoraadiyada iyagoo dhoowraya waxa ay ku heshiiyeen .balse waxaa si weyn isu bedelaya Soomaalida aragtidooda ay dhaafi la dahay inay u dabaal degaan guulo aan meel fog gaari Karin.
Kubadda siyaasadda ee arrimaha Soomaaliya maalmahaan waxay gacanta ugu jirtaa Cabdulahi Yusuf Axmed oo Madaxweyne loo doortay 2004 kadib markii goobta ay ka baxeen gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan,Ra’isulwasaare Cali Maxamed Geeddi iyo Gudoomiyahii Maxkamadda sare oo wali xabsi ku jira.
Hadaba waxaa la isweydiinayaa? Cabdulahi Yusuf isbedelkaan ma wuxuu uga faa-iideysan doonaa inuu isku soo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisaba mise wuxuu noqon doonaa nin rumeystay inuu gaaray guul waarta ,oo wuxuu martiqaadi doonaa kuwa siyaasada ay isaga soo horjeedaan inay si toosa iyo si dadbanba ula diriraan.
Mushtamaca Caalamku waxay ka sugayaan Cabdulahi Yusuf siyaasad degan ee ku wajahan horumarinta dib u heshiisiinta,meelmarinta Axdiyada Qaranka,adkeynta Nabadgelyada iyo dhowrista sharciga ku saleeysan dimoqoraadiyada iyo awood qeybsi markii horeba uu kursiga ku helay.
Ajnabiga oo loo turjumayo khudbadaha Cabdulahi Yusuf iyo gabayo qaarkood oo uu xusayo ,oo ay ka mid yihiin TOLKEEY OODA SOO JIBIYE,waxaa ay noqdeen qaar ay ka calool xumaadaan diblomaasiyiin filayay jawi is afgarad ee hor u socod leh inuu ka ambaqaado Madaxweyne Yusuf.
Cabdulahi Yusuf dadka ay dhinaca siyaasada isaga dhaw yihiin waxay mar walba ku eedeynayaan ajnabiga inay ka gaabiyeen gacan siinta dowlada federalka ee KMG .
Diblomaasiyiinta ku sugan Nairobi waxay si buuxda Waagacusub uga diideen inay si qayaxan uga hadlaan xaalada Soomaaliya balse qaarkood waxay tibaaxeen inay rabi lahaayeen siyaasad qunyar socoda oo aysan koox guul si gaara u tirsanin.
Waxaan marnaba muran ka taagneeyn inay dadku fiirinayaan Wadani iyo Shisheeyaba Cabdulahi Yusuf qofka uu ka dhigayo Ra’isulwasaarre oo si weyn indhaha loogu hayo Aqoontiisa,Xeeldheeridiisa siyaasadeed iyo qaabka uu wada hadal ula furayo Mucaaradka.
Taariikhda siyaasadeed waxaa mar kasta lagu ogaadaa in aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan aan lagu xalin Karin khilaafkooda eray hal dhinac iyo awood sheegasho .
Dadka Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ummadaha ugu baahida badan dunida ,jagooyinka siyaasadeedna waxay ku qaybsadaan xaalado ku saleeysan baahidooda,loomana baahna in lagu dhaqaaqo sedbursi siyaasadeed iyo maalinba koox si gaara Muraayad isugu daawato iyadoo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan wajigiisiiba arki la yahay.
Mushtamaca Caalamka waxay si buuxda u cadeeyeen in kaalmada la siinayo Soomaaliya ee ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta ay ku aadan yihiin waxqabad dhaba ee laga geysto jidka Nabada iyo dib u heshiisiinta.
Mushtamaca Caalamku jeeg banaan ee aysan waxba ku qorneeyn cidna uma dhiibayaan waxayna aad uga xumaanayaan hadii dib u heshiisiinta loo isticmaalo xoojin Colaado Sokeeye iyo dagaalo qabiila oo aan micna fog lahayn ,inta badana saameeyn ku yeelanaya nolosha shacbiga Soomaaliyeed iyo burburka maalkooda oo ku soo jiray 17 sano oo dagaalo ah,waxaana tilmaam gaara mudan xaalada ay ku sugan yihiin shacbiga Muqdisho oo masuuliyadooda ku aadan tahay dowlada federalka KMG.